Rahoviana ianao no tokony hampiasa Amazon marketing services?
Ny tsenan'ny Amazon dia tena mifaninana amin'ny androntsika ary mila mpivarotra iray ny mason'ny mpivarotra. Ireo Amazon Marketing Services dia ampiasaina hampitomboana marika azo tsapain-tanana amin'ny fametrahana ny dokam-barotra eo an-tampon'ny pejy amam-pikarohana Amazon. Zava-dehibe ny mampiasa Amazon Marketing Services satria efa manana fifamoivoizana sy mpividy Amazon izao. Zava-misy fanta-daza fa ny mpikaroka any Amazon dia manana saina amin'ny mpividy, ka ny zavatra rehetra ilainao dia ny mametraka ny zavatra eo anoloany. Vonona ny hividy mivantana avy hatrany ny olona raha mahita vidin-tsoa ho an'ny vokatra avo lenta.
Tsy misy mandeha any Amazonia noho ny tanjona ara-panatanjahana na tambajotra sosialy. Ny mpampiasa dia mampiasa io sehatra io miaraka amin'ny iray ihany no mikasa ny hanao mividy amin'ny aterineto. Ny ankamaroan'ny mpivarotra an-tserasera dia mahafantatra io fironana io ary manao izay azony atao mba hisorohana ny vahoaka. Ny fomba mahomby hanaovana izany dia ny fampiharana Amazon Marketing Services. Manampy ny dokam-barotra ho an'ireo mpampiasa azy izay vonona hanome anao ny volany raha tsy ilaina ny mahafeno azy ireo amin'ny toerana voalohany. Izany no antony mahatonga ny Amazon Marketing Services izay ahitana ny mpivarotra sy mpividy mpivarotra. AMS dia manome mpivarotra an-tserasera amin'ny fotoana ahafahana mifantoka amin'ireo mpifaninana ary ny fahafahana mametraka ny angonin'i Amazon amin'ny mpividy tsirairay.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hanazava aminao aho hoe ahoana no ahafahanao mahita ny zavatra hita amin'ny vokatra 480 tapitrisa amin'ny varotra Amazon amin'ny sehatra varotra Amazon amin'ny alàlan'ny Amazon Marketing Services.
Inona ny Amazon Marketing Services?
Amin'ny ankapobeny, ny Amazon Marketing Services dia sehatra iraisam-pirenenana Amazon ho an'ny fanentanana dokam-barotra amin'ny adiresy maimaika. Hatramin'ny taona 2012, ity programa ity dia misy amin'ny marika varotra rehetra amin'ny Amazon..Manome ny fahafahana mamolavola ny adiresinao Amazon dia mandany amin'ny dokambarotra voatokana izay hapetraka ara-toekarena any amin'ireo toerana mety hahitan'ny mpanjifa azy. Ireo sampan-draharaha Amazon Marketing dia manampy ny mpivarotra mitaky ny zavatra ilainy amin'ny fanatanterahana ireo singa fanasokajiana ireo ho toy ny teny fanalahidy, vokatra mifandraika, tombon-tsoa sy tanjona.
Raha manao fikarohana ara-barotra ianao ary mahita ny najanona izay mampanantena sy tena mifaninana, aza matahotra ny ho tonga mpilalao amin'ity lalao ity satria ny fifaninanana dia midika hoe fivarotana lehibe. Ao no ahafahan'ny Amazon Marketing Services ho tonga lafatra. Mba hahatonga anao hisarihana ny tsenan'ny orinasa nicheo anao, dia azonao atao ny mifantoka amin'ny fikarohana lalina amin'ny fifaninana izay tsy misy olona maro hafa handeha. Ity paikady fampiroboroboana tsotra ity dia hanampy amin'ny fahazoana tombony be amin'ny vola kely be indrindra.
Ankoatra izany, ny Amazon Marketing Services dia manampy amin'ny fampitomboana ny fananan-tany. Raha mijery tranokala tena simba avy amin'ny AMS ianao amin'ny pejy voalohan'ny fikarohana Amazon, dia ho hitanao fa ny fizarana pejy dia mizara ho fizarana telo: ADS lohateny lehibe, vokatra avy amin'ny fanohanana napetraka eo amin'ny horonan-tsarimihetsika, ary vokatra avy amin'ny fanohanana izay napetraka eo an-kavanana rail. Eo amin'ny vokatra avy amin'ny fanohanana dia afaka mahita ny vokatra azo avy amin'ny varotra sy ny safidin'i Amazonia isika (toy ny lalàna no vokatra mivarotra tsara indrindra izay manana vidin'ny fifaninanana).
Efa nandre ve ianao momba ny programa famokarana horonan-tsary Amazon? Ity fandaharan'asa ity dia manampy amin'ny famaritana ny vidin'ny pay-per-click voavidin'ny adila iray. Midika izany fa afaka mahazo varotra ianao ary manome avo lenta avo lenta noho ny mpihira faratampony faharoa.
Na dia izany aza dia ilaina ny milaza fa Amazon koa dia mametraka farafahakeliny farafaharatsiny isaky ny kliatry ny mpisera tsirairay amin'ny dokambarotra. Ity sanda ity dia marina ho an'ny dokam-barotra AMS sy ny doka ADS Source .